Pyae Phyo (MMiTD): ♪ “Everything You Need To Know watchOS 3” ♫
♪ “Everything You Need To Know watchOS 3” ♫
Apple က ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဧပြီလမှာ Watch စမတ်နာရီ စတင်မိတ်ဆက်လိုက် ကတည်းက Apple စမတ်နာရီရဲ့ အကောင်းစား Operating System ကို အသုံးပြုရဖို့ စိတ်ရှည်စွာ စောင့်မျှော်နေခဲ့ရတာပါ။ အခုတော့ watchOS3ကို Apple ကမိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပြီး Apple စမတ်နာရီဟာကျွန်တော်တို့ လက်မှတ် မဖြစ်မနေပတ်ရမယ့် နာရီ ဖြစ်လာပါတယ်။လျင်မြန်လွယ်ကူစွာဆက်သွယ်မှု ပြုလုပ်နိုင်သလို စမတ်နာရီကကျန်းမာရေးကို စောင့်ကြည့် စစ်ဆေးပေးပါ တယ်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေကိုလည်း ဖန်တီးထားပါတယ်။ စာရေးခြင်း၊ စာပြန်ခြင်း တို့ဟာလည်း အရင်ကထက် လွယ်ကူလာပါတယ်။ Watch Faces များ ပြောင်းလဲရတာလည်း လွယ်ကူလာ ပါတယ်။ လက်နဲ့ နာရီမျက်နှာပြင်ကို ပွတ်လိုက်တာနဲ့ အဓိကထိန်းချုပ်ခလုတ်များကို သုံးနိုင် ပါပြီ။ အသုံးနည်းတဲ့ ဘေးဘက်ခလုတ်အစား Dock အသစ်ပါလာပြီး Apps များကို ပြသပေးမှာပါ။ သင့် Mac ကို စမတ်နာရီဖြင့် Unlock လုပ်နိုင်ပါတယ်။
လာမယ့်အပိုင်းများမှာ watchOS3ရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များကို အသေးစိတ် ရေးပေးမှာပါ။ နောက်ပြီး သူ့ရဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု စွမ်းရည်များနဲ့ အလုပ်ကိစ္စအတွက် အသုံးဝင်မှုများကို ပြောပြမှာပါ။ အခြား စမတ်နာရီ များနဲ့လည်း နှိုင်းယှဉ်ပေးမှာပါ။ iPhone မှ Watch App ကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုတတ်အောင် သင်ပေးမှာပါ။ စမတ်နာရီကိုသင်နှစ်သက် သလိုသုံးနိုင်ဖို့အတွက် iPhone မှ Watch App ကို Set Upလုပ်ဖို့အရေးကြီး ပါတယ်။
<Watch Face ကို Customize လုပ်နည်း>
Apple က Watch Faces များ ပြောင်းလဲနည်းနဲ့ သူတို့ရဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲ နည်း ကိုအဆင့်မြှင့်ထားပါတယ်။ အခုဆိုရင် စမတ်နာရီကနေသာမက iPhone Watch App ကနေလည်း ပြောင်းလဲမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။ ပိုမိုကြီးမားလာတဲ့ မျက်နှာပြင်ကို အသုံးချလို့ရပါပြီ။ Watch Faces အသစ်များကိုလည်း ရွေးချယ် နိုင်ပါပြီ။ အထူးသဖြင့် Activity Analog, Activity Digital , Numerals နဲ့ Minnie Mouse တို့ဟာ အသုံးဝင်ပါတယ်။ လျင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲနိုင်ခြင်းနဲ့ Customize လုပ်နိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် သင့်စမတ်နာရီရဲ့ စကရင်နဲ့ အံကိုက်ဖြစ်မယ့် Watch Face များကို ဖန်တီးနိုင်ပါပြီ။
Watch Faces များကိုပြောင်းလဲဖို့ အခုဆိုရင်မျက်နှာပြင်ရဲ့ ဘယ် သို့မဟုတ် ညာဘက်သို့ပွတ်ဆွဲနိုင်ပါတယ်။ အရင်ဗားရှင်းမှာတော့ ပထမဦးစွာ မျက်နှာပြင်ကို သေချာဖိထားရပါတယ်။
2. Force Touch Display
Watch Faces အသစ်များထည့်ဖို့ မျက်နှာပြင်ကို အားပြင်းပြင်းနဲ့ ဖိပါ။ အစွန်ဘက်သို့ ပွတ်ဆွဲပြီး + ကိုနှိပ်၍ ရွေးချယ်ပါ။ Face တစ်ခုရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကို ပြောင်းလဲဖို့ Customize ကို ရွေးပါ။
3. Select the Complications
သင်ရွေးချယ်ထားတဲ့ Face တစ်ခုအတွက် Pages များကိုပွတ်ဆွဲပြီးကြည့်နိုင် ပါတယ်။ Option များကို ပြောင်း လဲကြည့်ဖို့ Digital Crown ကို သုံးပါ။ နှစ်သက်တဲ့စွမ်းရည်များကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ထည့်ပါ။ Digital Crown ကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး အဆုံးသတ်ပါ။
4. Use your iPhone
iPhone Watch App ကနေ Face Options များကို သုံးနိုင်ပါပြီ။ Face Gallery Tab ကိုနှိပ်ပါ။ watchOS3ရဲ့ Faces အသစ်များနဲ့ စွမ်းရည်များကို မြင်တွေ့ နိုင်ပါတယ်။
5. Addaface
သင်နှစ်သက်တဲ့ Face တစ်ချက်နှိပ်ပြီးသင်နှစ်သက်တဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ပြောင်းလဲဖို့ Options များကိုသုံးပါ။ သင့်လို အပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အရောင်၊ Typeface နဲ့စွမ်းရည်များကို ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ Add ကို နှိပ်ပြီး အဆုံးသတ်ပါ။
6. Use the face
သင့် စိတ်ကြိုက်ဖန်တီးထားတဲ့ Face ကို My Faces ရဲ့ အောက်မှ My Watch Tab မှာ ပြသထားပါတယ်။ အဲဒါကို နှိပ်ပြီး စကရင်အောက်ခြေကိုသွားပါ။ Set as current Watch Face ကို နှိပ်ပြီး သုံးနိုင်ပါပြီ။
<Faces များကို နေရာချနည်း>
Faces အချို့ကို အုပ်စုဖွဲ့ သို့မဟုတ် ဦးစားပေးပြသဖို့အတွက် iPhone App မှာ ပြုလုပ်ပါ။ My Watch>My Faces ထဲသွားပါ။ အစက်သုံးစက် အိုင်ကွန်ကို ဖိထားပြီး နေရာပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ အနီရောင်အစက်ကို နှိပ်ရင် Face ကို ဖျက်ပေးမှာပါ။
<Control Centre အသစ်ကို အသုံးပြုနည်း>
သင့် စမတ်နာရီမှာဘက်ထရီပမာဏဘယ်လောက်ကျန်သေးသလဲဆိုတာ လွယ်ကူစွာသိနိုင်ပါတယ်။ ဘက်ထရီ အရမ်းနည်းနေရင် ဒီအိုင်ကွန်ကိုနှိပ်ပြီး Power Reserve ကို Activate လုပ်ပါ။ ဒီစွမ်းဆောင်ချက်က အချိန်ပြ တာက လွဲပြီး ကျန်တဲ့စွမ်းဆောင်ချက် အားလုံးကို ပိတ်ထားပေးမှာပါ။
Airplane Mode ကို တစ်ချက်နှိပ်ရုံဖြင့် Bluetooth , WiFi တို့ကို လျင်မြန်စွာ ပိတ်နိုင်ပါတယ်။ လေယာဉ်စီး နေစဉ်မှာလည်း ပိတ်ထားရင် လုံခြုံပါတယ်။ ဒါက ဘက်ထရီသက်တမ်းကိုလည်း တိုးမြှင့်ပေးပါတယ်။
အစည်းအဝေးခန်းထဲ ရောက်နေလို့ ဖြစ်စေ၊ ရုပ်ရှင်ကြည့်နေလို့ဖြစ်စေ အခြား အသံများကို ပိတ်ချင်ရင် Mute Icon ကို နှိပ်ပါ။ Unmute လုပ်ဖို့လည်း ဒီအိုင်ကွန်ကိုပဲ နှိပ်ပါ။
<Ping your phone>
သင့် iPhone ပျောက်နေရင် ဒီခလုတ်ကို နှိပ်ခြင်းဖြင့် ဖုန်းက သင့်ကို အသံဖြင့် အချက်ပေးမှာပါ။
Notification များကို စမတ်နာရီမှာ ပိတ်ထားချင်ရင် Do Not Disturb ကို နှိပ်ပါ။ ဒါဆိုရင် iPhone မှာသာ Notification များ ရောက်မှာပါ။
Headphones, Speakers နဲ့ Wireless AirPods အသစ်တို့လို AirPlay Device များကို စမတ်နာရီနဲ့ ချိတ် ဆက်ချင်ရင် ဒီခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။
<သင် အသုံးများတဲ့ Apps များကို လျင်မြန်စွာ ဖွင့်ပါ>
အခုဆိုရင် နာရီရဲ့ဘေးဘက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ရင် Dock ကို ပြသမှာပါ။ အဲဒီမှာ သင်အသုံးများတဲ့ Apps များကို ပြသထားပါတယ်။ Dock မှာ ရှိတဲ့ Apps များဟာ Memory မှာ နေရာယူထားတဲ့အတွက် Apps များကို လျင်မြန်စွာ ဖွင့်နိုင်ပါတယ်။
လွယ်ကူစွာ အသုံးပြုနိုင်ဖို့ သင် နှစ်သက်တဲ့ Apps များကို Dock မှာ ထည့်နိုင် ပါတယ်။ ထည့်ချင်တဲ့ App ကို ဖွင့်ပြီး ဘေးဘက်ခလုတ်ကို နှိပ်၍ Dock ကို ဖွင့်ပါ။
2. Keep in Dock
သင်ဖွင့်လိုက်တဲ့ App ဟာ Dock မှာ ပေါ်နေပေမယ့် အမြဲတမ်းပေါ်နေဖို့ အတွက် Keep in Dock ကို နှိပ်ပါ။ အဲဒီကနေ ဘယ် သို့မဟုတ် ညာဘက်သို့ ပွတ်ဆွဲခြင်းဖြင့် Dock မှ အခြား Apps များကို ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
3. Remove an app
Dock မှ App တစ်ခုကို ဖယ်ရှားဖို့အတွက် App ကို နှိပ်ပါ။ အပေါ်ဘက်သို့ ပွတ်ဆွဲပြီး Remove ကို နှိပ်ပါ။
<Activity Sharing ကို Set Up လုပ်နည်းနဲ့ အသုံးပြုနည်း>
ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်ခြင်းဟာ ကောင်းမွန်ပေမယ့် သင့်ရဲ့တိုးတက်မှုကို အခြားလူများနဲ့ ပြိုင်ဆိုင်ခြင်းက ပိုမိုတိုးတက်စေပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Activity Sharing စွမ်းဆောင်ချက်ကိုစမတ်နာရီမှာ ထည့်ပေးထားပါတယ်။ သင့်သူငယ်ချင်းများရဲ့ ရည်မှန်းချက်များ၊ အောင်မြင်မှုများနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းများ ကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကလည်း သင့်ရဲ့ဒေတာများကို မြင်နိုင်တဲ့ အတွက် ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းထန်မှာပါ။ သူငယ်ချင်းများကို စိန်ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်မှာ ကိုယ်ကာယဆရာရှိရင် သူနဲ့လည်း သင့်ဒေတာကို မျှဝေနိုင်ပါတယ်။
iPhone မှ Activity App ကို ဖွင့်ပြီး Sharing Tab ကို ရွေးပါ။ ညာဘက်မှ + Button ကို နှိပ်ပြီး သူငယ်ချင်းများ ရဲ့ အမည်များကိုထည့်ပါ။ သူတို့က လက်ခံဖို့အတွက် သူတို့မှာ စမတ်နာရီ ရှိဖို့ လိုပါတယ်။
2. Open Watch app
နာရီမှ Activity App ထဲသွားပြီး ဘယ်ဘက်သို့ ပွတ်ဆွဲပါ။ အဲဒီမှာ သင့် သူငယ်ချင်းများနဲ့ သူတို့ရဲ့ အောင်မြင်မှု အကျဉ်းချုပ်ကိုပြသထားပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အမည်ကိုနှိပ်ပြီး အသေးစိတ်ဒေတာများကြည့်ပါ။ သူတို့ကို စိတ် ဓာတ်ခွန်အားတက်ကြွစေမယ့် Message များ ပေးပို့နိုင်ပါတယ်။
အပေါ်မှ သူငယ်ချင်း ကဏ္ဍရဲ့ အောက်ကို သွားပြီး “ Send message to all “ ကို နှိပ်ပါ။ စိန်ခေါ်မှုများကို သတ်မှတ်ခြင်း၊ သူငယ်ချင်းများကို ရွေးချယ်ခြင်း များ ပြုလုပ်ပြီးရင် Send Message ကို နှိပ်ပါ။
<သင့်ရဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများကို ဖွက်ပါ>
သင့် သူငယ်ချင်းများက သင့်ရဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများကို မမြင်စေချင်ရင် iPhone Activity App ကို ဖွင့်ပြီး Sharing ကို နှိပ်ပါ။ သူငယ်ချင်းကို ရွေးချယ် ပြီး Hide my Activity ကို နှိပ်ပါ။
<စမတ်နာရီကနေ ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ စွမ်းဆောင်ချက် အသစ်များ>
Apple ကနောက်ဆုံးထုတ် watchOS မှာ စွမ်းဆောင်ချက်အသစ်များ ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Find My Friendsကိုဖွင့်ပြီးသူငယ်ချင်းများရဲ့ တည်နေရာကိုကြည့်ဖို့ Contact ကို နှိပ်နိုင်ပြီး Watch Faces မှာ Reminder မှတ်သားနိုင်ပါတယ်။ စမတ်နာရီရဲ့ အဓိက စွမ်းဆောင်ချက်လေးခုကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
<SOS ဖြင့် အရေးပေါ် ဖုန်းခေါ်ပါ>
သင့်ရဲ့ iPhone ဟာ ၀ိုင်ဖိုင်နဲ့ ချိတ်ဆက်မိနေရင် သို့မဟုတ် ၀ိုင်ဖိုင်နားမှာ ရှိနေရင် နာရီရဲ့ ဘေးဘက် ခလုတ်ကို ဖိထားလိုက်တာနဲ့ အရေးပေါ်ဖုန်း ခေါ်မှာပါ။ အရေးပေါ် ဖုန်းခေါ်ရမယ့် လူများကို iPhone Watch App ရဲ့ General>Emergency SOS>Add SOS Contact မှာ သတ်မှတ်ပါ။ သင့် တည်နေရာနဲ့ တကွ Message ကို သူတို့ထံ ပေးပို့မှာပါ။
<Apple Pay ကို ကျယ်ပြန့်စွာသုံးပါ>
သင့်ရဲ့ Debit Cards , Credit Cards များကို သင့် iPhone ရဲ့ Apple Watch App ထဲကို ဒစ်ဂျစ်တယ် နည်းဖြင့် ထည့်ထားပြီးရင် ပထမဆုံး အကြိမ်အနေဖြင့် In-App Payment များကို ပြုလုပ်နိုင်ပါပြီ။ Developer များကို သူတို့ရဲ့ Apps များမှာ Apple Pay ကို ထည့်သွင်းဖို့ Apple က အားပေးနေတဲ့အတွက် လာမယ့် လများမှာ ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ သုံးနိုင်တော့မှာပါ။
<Mac ကို စမတ်နာရီဖြင့် Unlock လုပ်ပါ>
သင့်ရဲ့ Mac ကို Login ၀င်ဖို့ Password ရိုက်ထည့်ဖို့ မလိုတော့ပါဘူး။ သင် စမတ်နာရီကို ၀တ်ဆင်ထားချိန်မှာ Mac အနားကပ်လိုက်တာနဲ့ အလို အလျှောက် Unlock လုပ်နိုင်ပါတယ်။ Mac ရဲ့ System Preferences> Security & Privacy > General ထဲသွားပြီး “ Allow your Apple Watch to unlock your Mac” မှာ အမှန်ခြစ်ပါ။ ကွန်ပျူတာရဲ့ Password ကို ထည့်ပေးပါ။
စမတ်နာရီရဲ့ Activity App ဟာ သင့်ရဲ့နေ့စဉ်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများကို တိုင်းတာတွက်ချက်ပေးနိုင်ပါ တယ်။ သင် မတ်တပ်ရပ်နေခြင်း၊ လမ်းလျှောက် နေခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေခြင်းကို အချိန်နဲ့တကွ မှတ်တမ်းတင်ပေး နိုင်ပါ တယ်။ သူက သင့်ရဲ့ အသက်၊ လိင်၊ အရပ်၊ အလေးချိန်တို့အပေါ် အခြေခံပြီး သင့်ရဲ့အကြံ့ခိုင်ဆုံး အနေ အထားရအောင် သူကကူညီနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ကိုလည်း သူက သတ်မှတ်ပေးခိုင်းမှာပါ။ အဲဒါတွေကို ပထမဆုံး အကြိမ် App ကို ဖွင့်တဲ့အခါမှာ ထည့်ပေးရမှာပါ။
App ကို ဖွင့်ရင် Stand, Move , Exercise ဆိုတဲ့ စက်ဝိုင်းသုံးခုကို မြင်ရမှာပါ။ အဲဒီစက်ဝိုင်းများက သင်ရပ် နေတဲ့အချိန်၊ လောင်ကျွမ်းတဲ့ ကယ်လိုရီနဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တဲ့ အချိန်တို့ကို ဖော်ပြပေးမှာပါ။
2. Scroll for stats
စက်ဝိုင်းများရဲ့အောက်မှာ တစ်နေ့တာအတွက်သင့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်နဲ့ သင့်ရဲ့ ခြေလှမ်းများ၊ သွားတဲ့အကွာအဝေး ကို ဖော်ပြပေးမှာပါ။ ဂရပ်ဖ်များဖြင့်လည်း ပြသပေးပါတယ်။
3. Adjust the goals
Activity App ရဲ့စကရင်ကိုအားဖြင့်ဖိပြီး တစ်နေ့တာအတွက် လောင်ကျွမ်းချင် တဲ့ ကယ်လိုရီပမာဏကို သတ် မှတ်ဖို့ Change Move Goal ကို ရွေးပါ။ - နဲ့ + အိုင်ကွန်ကို နှိပ်ပြီး ချိန်ညှိပါ။ Update ကို နှိပ်ပါ။
4. Use Watch app
Activity Settings ကိုချိန်ညှိဖို့ Watch App ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ Reminder များ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ရည်မှန်း ချက်များကို ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ ရည်မှန်းချက် အတွက် Notification များရယူခြင်းများကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
<မသန်စွမ်းသူများအတွက် watchOS ရဲ့ စွမ်းဆောင်ချက်>
Apple ရဲ့ စမတ်နာရီဟာ Wheelchair သုံးနေရတဲ့ မသန်စွမ်းသူများအတွက် အထောက်အကူပြုတဲ့ ပထမဆုံး ကိုယ်လက်ကြံ့ခိုင်မှုတိုင်းတာတဲ့ ကိရိယာပါ။ Wheelchair သုံးသူများက Activity App ကို အသုံးချနိုင်ပါပြီ။ iPhone Watch App ကနေ Activate လုပ်ရမှာပါ။ Health ကို ရွေးချယ်ပြီး Wheelchair မှာ Yes ပေးပါ။ App က Stand စက်ဝိုင်းကို Roll အဖြစ် ပြောင်းပေးမှာပါ။ မသန်စွမ်းသူက Wheelchair ကို တွန်းတဲ့ အချိန်ကို တွက်ချက် ပြသပေးမှာပါ။ တစ်နာရီပြည့်တိုင်းလည်း လှုပ်ရှားမှုအတွက် Notification ပေးပို့မှာပါ။ Wheelchair သုံးသူ ၂ ယောက်အတွက်လည်း ပံ့ပိုးပေးပါတယ်။ အဲဒီ စွမ်းဆောင်ချက် ကို Wheelchair သုံးသူများအတွက် အထူး သုတေသနပြု လုပ်ပြီးမှ ထည့်သွင်းပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
<Breathe App အသစ်ကို အသုံးပြုနည်း>
Apple စမတ်နာရီဟာ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက် မရှိမဖြစ် ကိရိယာတစ်ခု ဖြစ်အောင် ပုံစံထုတ်ထားပါတယ်။ ကိုယ်လက်ကြံ့ခိုင်မှုအပြင် စိတ်ကျန်းမာရေး အတွက်လည်း သူက အထောက်အကူပေးပါတယ်။ watchOS3ရဲ့ Breathe App က စိတ်ဖိစီးမှုများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်။ သူက လေရှူသွင်းရမယ့် အချိန်နဲ့ ရှူထုတ်ရမယ့် အချိန်တို့ကိုလမ်းညွှန်ပြသပေးပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်စဉ်မှာ မျက်စိပိတ်ထားချင်ရင်လည်း နာရီမျက်နှာပြင် ကို အသာ ထိတွေ့ပြီး လေ့ကျင့်ခန်းကို သိရှိနိုင်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း တိုးတက်မှုကို Summary Screen မှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
1. Alter the time
လေ့ကျင့်ခန်း စတင်ဖို့ Breathe App ကိုဖွင့်ပြီး Start ကိုနှိပ်ပါ။ Digital Crown ကိုလှည့်ပြီး အချိန် သတ်မှတ်ပါ။ ၁ မိနစ်နဲ့ ၅ မိနစ်ကြား ရွေးပေးပါ။
2. Pickaface
Breathe App ကို Watch Face အဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ Face တစ်ခုကို ကြည့်နေစဉ်မှာ မျက်နှာပြင်ကို ဖိထားပြီး Customize ကို နှိပ်ပါ။ Complication ကို နှိပ်ပြီး Digital Crown ဖြင့် Breathe ကို ရွေးပါ။
iPhone မှာ Breathe App ရဲ့ ဖန်ရှင်ကို ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ Watch App မှာ My Watch>Breathe ထဲသွားပါ။ Breathe Reminders ကို ရွေးပြီး တစ်နာရီ တိုင်းကနေ ၇ နာရီတိုင်း အထိ ရွေးနိုင်ပါတယ်။
4. Change Breathe Rate
တစ်မိနစ်လျှင် ၇ ကြိမ် အသက်ရှူမလားလို့ သင့်ကို မေးမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဒီထက်မြန်ချင်ရင် Breathe Rate ကို နှိပ်ပြီး တစ်မိနစ်လျှင် ၄ ကြိမ်ကနေ ၁၀ ကြိမ်အထိ ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။
5. Switch off the haptics
လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်စဉ်မှာ စကရင်ကို ကြည့်ပြီး ပြုလုပ်ချင်သူများအတွက် တုန်ခါမှု မလိုအပ်ပါဘူး။ Prominent ကနေ Minimal အထိ ပြောင်းနိုင်သလို လုံးဝပိတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
6. Use Previous Duration
လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တိုင်း ကြာချိန်ကို ပြန်သတ်မှတ်ဖို့ မလိုအောင် Previous Duration ကို အမြဲသုံးနိုင်ပါတယ်။ Use Previous Duration ကို On ထားပါ။
<Summaries ကို လေ့လာပါ>
တစ်နေ့တာအတွက် Summary ကိုကြည့်ရင် တစ်မိနစ်လျှင် အသက်ရှူတဲ့ အကြိမ်နဲ့ ပျမ်းမျှနှလုံးခုန်နှုန်းကို တွေ့ နိုင်ပါတယ်။ တနင်္လာနေ့တိုင်းမှာ တစ်ပတ်စာအတွက် Summary ကို ပြသပေးဖို့ Watch App မှာ Weekly Summary ကို On ပေးပါ။
<Message များကို လျင်မြန်စွာ တုံ့ပြန်ပါ>
စမတ်နာရီဟာ အရွယ်သေးငယ်ပြီးကီးဘုတ်မပါတဲ့အတွက် အတိတ်မှာတော့ စာပြန်ဖို့ခက်ခဲစွာ ပြုလုပ်ရပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် watchOS3မှာ စာပြန်ရတာ လျင်မြန်လာပါပြီ။ ပြန်စာများကို ကြိုတင်ရေးသားထားနိုင်ခြင်းနဲ့ အသံဖြင့် စာပြန်နိုင်ခြင်း စွမ်းရည်များပါလာပါပြီ။ စာပြန်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့အရာ အားလုံးဟာ တစ်နေရာတည်း မှာ ရှိနေပါပြီ။
1. Speedier Responses
Smart Reply ကို Message Notification ကနေသုံးနိုင်ပါပြီ။ အောက်ကို ဆင်းပြီး ပြန်စာကိုရွေးပေး လိုက် တာက အမြန်ဆုံးနည်းပါ။
2. Full-screen Effects
Happy Birthday လို့ ပါးစပ်ကပြောလိုက်တာနဲ့လှုပ်ရှားသက်ဝင်တဲ့ ဘောလုံး ကိုပါတစ်ဖက်လူကရရှိမှာပါ။ ဒါ ဟာ အချိန်ကုန် သက်သာသလို အကျိုးရှိ ပါတယ်။
3. Sendasticker
iOS 10 မှာစတစ်ကာများကိုအင်စတောလုပ်ပြီး သုံးနိုင်ပါတယ်။ watchOS3မှာ သင်ပေးပို့ထားတဲ့ စတစ်ကာအားလုံးကိုသုံးနိုင်ပါတယ်။ Emoji Icon ကို နှိပ်ပြီး ဘယ်ဘက်သို့ ပွတ်ဆွဲပါ။
iOS 10 မှာ စတစ်ကာများကို အင်စတောလုပ်ပြီး သုံးနိုင်ပါတယ်။ watchOS3မှာ သင်ပေးပို့ထားတဲ့ စတစ် ကာအားလုံးကို သုံးနိုင်ပါတယ်။ Emoji Icon ကို နှိပ်ပြီး ဘယ်ဘက်သို့ ပွတ်ဆွဲပါ။
<လက်ရေးစာများအား စာသားအဖြစ် ပြောင်းခြင်း>
Scribble စွမ်းဆောင်ချက်က ကီးဘုတ်မပါတဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးပါတယ်။ နာရီမှာလက်ဖြင့် စာရေးသား နိုင်တာပါ။ သူဟာ Messages ကနေ Mail အထိ စာပြန်လို့ရတဲ့ Apps များမှာ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။
1. Tap Scribble
စာရေးသားတော့မယ့် အခါမှာ Scribble Button ကို နှိပ်ပါ။ ဒါဆိုရင် စကရင် မှာ လက်ဖြင့် စာရေးနိုင်ပါပြီ။ ရေးသားပြီးတာနဲ့ လက်ရေးစာကို စာသားအဖြစ် ပြောင်းပေးမှာပါ။
2. Space and Delete
Punctuation နဲ့ Special Characters များကိုလည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ စာရေး သားရာမှာ အဆင်ပြေစေဖို့ အမှားများကို ဖျက်ပေးတဲ့ Delete နဲ့ Space Button ပါပါတယ်။
စာရေးသားစဉ်မှာ Digital Crown ကို လှည့်ပေးရင် စာသားများကို ကြိုတင် ခန့်မှန်းပေးပါတယ်။ List ကို Scroll လုပ်ပြီး သင့်တော်တဲ့ စာလုံးကို ရွေးပေးပါ။ စာရေးပြီးရင် Send ကို နှိပ်ပါ။